one pack stabilizer yeakajeka Vagadziri - China imwe pack inodzikamisa kune yakajeka vatengesi & fekitori
Kupisa Stabilizer yePVC uye UPVC fittings drainage S ...
Karusiyamu Zingi imwe rongedza Stabilizers kuti Luxury raive nebutiro T ...
Eco-inoshamwaridzika inotsigisa yePurasitiki Vinyl PVC ceili ...
Eco-inoshamwaridzika isina-chepfu Stabilizers yecalcium zinc ...
Isina-chepfu inogadzikana yemupendero trim yakapfava uye inochinja ...
PVC stabilizer mbishi zvinhu zvekupfira bindu hose nyoro pombi PVC mapaipi epurasitiki
Iyo plasticizer inosanganisirwa muPV matrix inowedzera kuchinjika kwayo kune chero chero chinhanho chinodiwa uye inowedzera kuwedzera chiyero chekushandisa kwePlasticized PVC. Inonyanya kushandiswa kune machubhu (chikafu, kurapwa), Hoses (kumanikidza, gadheni, pombi), gaskets, swing madhoo uye handrails. Iwo maStabilizers ane kudziya kwakanyanya kupisa, hwema hwakadzika, yakanakisa yemukati yemhepo mhando, kuenderana kwakanaka nemapurasitiki.
Inoturuya yemahara inosimudza yeakajeka PVC mapepa machira ekudhinda akapfava PVC kurongedza
Kunze kwePVC mafirimu akaomarara, kune zvakare hukuru hwechokwadi hwekushandisa kweCaZn Stabilizer yakagadziriswa inochinja PVC mafirimu. Musika uyu unotungamirwa nemafirimu epurasitiki, kunyange hazvo mafirimu asingachinjiki epurasitiki ari kupinda mumusika. Iyi firimu inochinjika inoshandiswa zvakanyanya mu lamination mafirimu, emahwindo ekuputira mafirimu, yekuzvinamatira firimu, kushambadzira firimu, shrink mafirimu, mota kuputira mafirimu, anodhinda mafirimu, traffic chiratidzo mafirimu, toyi mudziyo mafirimu, zvekurapa mafirimu, tafura mbatya nezvimwe. yakanakisa kugadzira, Yakakwira kupisa kudziyisa, yakadzika ndiro kunze zvivakwa, yakaderera hwema, yakanakisa kudhinda.
Imwe kurongedza kupisa kupisa Stabilizers emapurasitiki machira akaomarara roll & kuputira firimu PVC mateti
Pvc yakaoma firimu inowanzo shandiswa kurongedza mishonga yechigadzirwa yakanakira kurongedza kwemapiritsi, makapisi, majekiseni, majekiseni uye nezvimwe zvezvimwe zvekurapa. Uye zvakare, inoshandiswa kumatoyi, magajeti, akamira, zvipoda, maturusi, zvinhu zvekudya, kushongedza, zvekuvaka uye maindasitiri akasiyana siyana kurongedza chinangwa. Aya mafirimu ari kunyanya kuburitsa kubva kuCa / Zn PVC Stabilizers sezvo yagara kwenguva refu, yakasimba tensile simba, hunyoro chiratidzo, kubvaruka kuramba, hapana inokuvadza inorema simbi, hapana phenol, kukwenya mahara. Zvakare, kurongedza kwakapfava kuri kutungamira iko kurongedza maitiro sezvo isingangopa chete kudzivirira kuzvigadzirwa asi zvakare inopa nyore kune vatengi pamwe nezvakanaka kukanganisa nharaunda.
PVC yokuvirisa, PVC Kupisa Kunodzikamisa Flexbile, PVC Isina-Inotyisa Stabilizer, Pvc Heat Inodzikamisa, Pvc Imwe Pack Inodzikamisa, PVC Stabilizer,